Life Hacks Archives - Shop
Shop > All Articles > Life Hacks
Beauty, Beauty, Life Hacks, Lifestyle, Lifestyle, Technology, Travel
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းသို့ ခရီးနှင်သည့်အခါ ယူဆောင်သွားသင့်တဲ့ ပစ္စည်း (၁၀) မျိုး0106
The KaungHtet April 21, 2022 8:26 am April 21, 2022
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းနဲ့ အထက်အညာဒေသတွေမှာ ကြည်ညိုဖွယ်စေတီပုထိုးများနဲ့ ရင်သက်ရှုမောဖွယ် ခရီးသွားနေရာများစွာရှိပါတယ်။ ထိုဒေသများသို့ ခရီးနှင်တော့မယ်ဆိုရင် မိမိနဲ့တစ်ပါတည်း အိမ်ကနေသယ်ဆောင်သွားသင့်တဲ့ ပစ္စည်း (၁၀) မျိုးက ဘာတွေဖြစ်မလဲ? သိရှိဖို့ ဆက်လက်ဖတ်ရှုလိုက်ရအောင်! Power Bank ယခုလို လျှပ်စစ်မီးခဏခဏပြတ်တဲ့အချိန်မှာ ခရီးသွားရင်တောင် …
Stay-Home ကာလမှာ အထောက်ကူဖြစ်စေမည့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများ0360
The KaungHtet October 9, 2020 10:02 am January 10, 2022
အိမ်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေကို အထိအခိုက်မရှိ သန့်စင်နိုင်ဖို့အတွက် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အချို့ကိုသိထားဖို့လိုမယ်နော်… 🔸 ပန်းကန်ပြားမှ ခြစ်ရာတွေကို မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း 🔸 သင့်ရဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲက ပန်းကန်တွေမှာ ခြစ်ရာရှရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခါ ဒီနည်းလမ်းလေးက …
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းများ0463
The KaungHtet June 11, 2020 10:36 am June 11, 2020
အမျိုးသားများဟာ တစ်နေ့တာကို လွယ်လင့်တကူ ဖြတ်ကျော်တတ်ကြပါတယ် … အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်းကို ပျိုမေတွေသာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာဟု သတ်မှတ်ထားကြပါတယ် … ယနေ့ခေတ်အချိန်အခါမှာတော့ အမျိုးသားများဟာလည်း အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းမို့လိုအပ်ပြီး ပျိုမေတွေရဲ့ အသဲနှလုံးကို ရယူဖမ်းစားမို့အတွက် လိုအပ်နေပါပြီနော် … …
Life Hacks, Quizzes
မိတ်ကပ်တွေအကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိလဲ ?0487
The KaungHtet April 6, 2020 9:58 am April 7, 2020
Shop.com.mm မှပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးသူများဟာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအကြံပြုထားသော ကာကွယ်မှုများကို ထိရောက်စွာလိုက်နာပြီး ဝယ်ယူသူများထံသို့ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် အိမ်မှာနေပြီး အွန်လိုင်းကနေ စျေးဝယ်လိုက်ပါ … Shop app ကို download ရယူရန် – Link Shop app …
Life Hacks, Others
အွန်လိုင်းက စျေးဝယ်တဲ့အခါ သင်ဘယ်လောက်စျေးဝယ်တော်လဲဆိုတာခန့်မှန်းကြည့်ရအောင်?0616
The KaungHtet April 1, 2020 9:52 am April 2, 2020
အပြင်မှာပဲ စျေးဝယ်ဝယ် ၊အွန်လိုင်းကပဲစျေးဝယ်ဝယ် စျေးဝယ်ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါတယ်။ မိမိလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကို သေချာသိရှိနားလည်ပြီးတော့ စေ့စေ့စပ်စပ်ဝယ်တတ်မှာစျေးဝယ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ သင်ရောစျေးဝယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို ဖြေပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
❄Air con ကို မီတာခ အရမ်းမကုန်အောင်ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ?❄ 4622